ချစ်ကြည်အေး: April 2010
တကယ်တော့ ဒီနေ့ ဘာလီအပိုင်း ၉ကို ရေးတင်ဖို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ မနေ့ညက CNA သတင်းမှာ ဘာလီ ကူတာဘိခ်ျက ကောင်းဘွိုင် ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြည့်လိုက်ရ တယ်။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ယူကျု့က ဗီဒီယိုကလစ် ကိုသွားကြည့်၊ တခါ ဒီမနက် The New Paper သတင်းစာမှာ ပါလာတာတွေ့ပြန်တော့ ဒီသတင်းကို အရမ်းရေးချင်သွားတယ်။
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတာက ကျမက ဘာလီပြန် ပူပူနွေးနွေး မဟုတ်တောင် သိတ်ပြီး မအေး စက်သေးတဲ့အတွက်ရယ်၊ ကျမတို့ နေခဲ့တဲ့ Kuta Beach မှာ ဖြစ်နေလို့ရယ်ပါ။
သတင်းကိုတော့ အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး။ ခြုံပြောရရင် အိန္ဒိယလူမျိုး စင်္ကာပူပီအာ ခံယူထားတဲ့ Film Maker - Mr.Virmani ဆိုသူဟာ လာမဲ့ July မှာလုပ်မဲ့ Melbourne Int'L Film Festival အတွက် Documentary short film တခု ဘာလီ Kuta Beach မှာ သွားရိုက်ရာက စခဲ့ပါတယ်။
သူ တင်ပြချင်တာက ဘာလီရဲ့ အလှအပ နဲ့ Beach ကို အမှီပြုလို့ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြတဲ့ Cowboys တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝ ဖြစ်နိူင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လို နားလည်မှု လွဲ ကြတယ် မသိဘူး။ ဘာလီဟာ ဒီ Cowboys တွေကြောင့် အကျည့်တန် စေတယ်။ Cowboys တွေကိုလည်း ဂျစ်ဂလိုတွေ(Gigolo) လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုတယ်လို့ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီမှာ Cuta Beach ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက Beach Boy တွေကို ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းတာတွေ လုပ်လာ ကြတယ်။
တိုတိုပြောရရင် ဒါကို Beach Boy တွေက မကျေနပ်ဖူးပေါ့။ သူတို့ ဒီလိုနေ-စားလာတာပဲ ဆယ်စုနှစ်မက ရှိခဲ့ပြီ ခုတော့ ဒီ Film-Maker ကြောင့် လို့ဆိုတယ်။ Mr.Virmani ကလည်း ပြောရှာပါတယ်။ Beach Boys တွေအတွက် သူစိတ်မ ကောင်းတဲ့ အကြောင်း၊ သူပေးချင်တဲ့ မက်စိပ်က ဒါ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
ကျမလည်း Kuta Beach မှာ နေခဲ့တော့ Beach Boy တွေနဲ့ Foreigner အမျိုးသမီးတွေရဲ့ နေထိုင် ဆက်ဆံပုံတွေ တွေ့ခဲ့တာပါပဲ။ တယောက်နှုတ်ခမ်းမှာ တေ့ထားတဲ့ စီးကရက်ကို တယောက်က ယူသောက်လို့၊ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းဖွဲ့ ထိုင်လို့၊ တီးကြ မှုတ်ကြ ဆိုကြ ကကြ နဲ့ပါပဲ။ ကျမ အနေနဲ့တော့ ထူးဆန်းတယ် လည်း မထင်ခဲ့မိပါဘူး။ ဘာလီမှာ Beach Boys တွေနဲ့ နိူင်ငံခြား သူတွေ တွေ့ရသလို၊ ထိုင်းသွား ရင်လည်း ထိုင်းမတွေကို နိူင်ငံခြားသား လူဖြူတွေနဲ့ တွဲလျက် တွေ့ရမှာပါပဲလေ။ ဆန်ပေးလို့ ဆီရနေကြတဲ့ ကိစ္စမို့ အထူးတလည် ဖြစ်မ နေတော့ ပါဘူး။
သတင်းစာထဲမှာပါတဲ့ Beach Boy တချို့ရဲ့ ပြောစကားတွေကဖြင့် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
"ငါတို့က လာသမျှလူတွေကို တာဝန်ကျေအောင် ဧည့်ခံရမှာပဲ။ တချို့ အမျိုးသ မီးတွေက ငါတို့ကို တိုးဂိုက်အနေနဲ့ ငှားတယ်။ ငါတို့ ပါသွား တဲ့အတွက် လမ်းခရီး တလျှောက်မှာ အမှတ် တရ ပစ္စည်းဝယ်ရင် ဘာမဆို သက်သာတဲ့ဈေး နဲ့ရတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲဒီရက် တွေမှာ သူတို့စားသလို အကောင်းစား တွေ စားရတယ်။ တချို့ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ငါတို့ ၂ရက်-၃ရက်ကြာရင် သူတို့ ဟိုတယ် ခန်းထဲ ရောက်သွားကြ တယ်။ ဒီအတွက် ငါတို့ ပိုက်ဆံမ ယူဘူး ဒါကြောင့် ငါတို့ဟာ ဂျစ်ဂလိုတွေ မဟုတ်ဘူး" သူတို့လိုချင်တဲ့ သာယာမှု ကို ငါ တို့ကပေးပြီး သူတို့က နာရီ စတဲ့ အဖိုးတန်လက်ဆောင်တွေ ပြန်ပေးတယ် လို့ ပြောကြတယ်။
"အမျိုးသမီးတယောက်ဆိုရင် ငါ့ကို နောက်နှစ်မှာ ဂျာမဏီကို သူနဲ့အတူ ခေါ်သွားပါ့မယ်လို့ ဂတိများတောင် ပေးတယ်။ အဲသလိုသာ တကယ်ခေါ်သွားရင် ငါကတော့ အဲဒီ အမျိုးသမီးကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းပြီး ပေါင်းသင်းမယ်။ ဂျာမဏီ ကျရင်တော့ ငါ့ဘဝဟာ ခုလို မဟုတ်တော့ ဘူး ဆင်းရဲတွင်းက လွတ်ပြီလို့" ပြောသတဲ့။ တကယ်လည်း သူတို့ဘဝမှာ ငတ်တခါ ပြတ်တ လှည့်တွေ ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ ဘာလီ လိုနေရာမျိုးဟာ ခြောက်သွေ့တဲ့ ပွင့်လင်းရာသီ ရောက်မှသာ သူတို့လေးတွေလည်း အူစိုရပေတာကိုး။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဂတိပေး သွားတဲ့ အမျိုးသမီး ကဖြင့် ဂျာမဏီကို ခေါ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ ပြောရရင်တော့ Beach Boy လေးတွေဟာ အပျော်ကြံ သွားခြင်း ခံရရှာသူတွေ လို့တောင် ရယ်ပွဲဖွဲ့ ပြောရမလိုလို...။ ဒီလိုနဲ့ပဲ သူတို့လည်း နောက်ထပ် လာသမျှ အသစ်အသစ်သော နိူင်ငံခြားသူတွေနဲ့ ချစ်ပွဲဝင်ကြပြန် တယ်။
Beach Boy တွေဟာ အအေး၊ စီးကရက်ရောင်းတယ်၊ Beach ထိုင်ခုံနဲ့ ရောင်စုံထီး တွဲထားတာတွေ ငှားစားတယ်။ တချို့လည်း Surfing သင်ပေးနိူင်ကြသူတွေပါ။ Beach မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ဘာလီကျွန်းပေါ်ကချည်း မဟုတ်ပဲ ဂျာဗားကလာသူ တွေလည်းရှိ၊ တချို့လည်း ဝပ်ပါမစ် မရှိပဲလုပ်နေသူတွေတောင် ရှိသတဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခုတော့ အရင်လို အနေအစား မချောင်တော့ပဲ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ စောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုအောက်မှာ Beach Boy တွေ အတော် စိတ်အကျဉ်းကျနေကြလေရဲ့။
ယူကျူ့က ဗီဒီယိုကိုတော့ ဒီမှာ ကြည့်နိူင်ပါတယ်
ငါ အစိမ်းရောင် ပြထားတာပဲလေ...
ဒါပေမဲ့ တတိန်တိန် အသံပျောက်....
ဂျီမေးလ်ကို ခဏခဏ ရီစတပ် ပြန်လုပ်ရင်း...
ဟင်း....!! နှလုံးသား ကင်းမဲ့လိုက်ကြပုံများ...
ငါ့ကို ဘယ်သူမှ မေးလ်ပို့ မထားကြဘူး.....၊
ငါ ပိုစ့် အသစ် တင်လို့ထား....
နာရီများ ဖြတ်ကျော် ဇီးရိုးကော်မန့် တဲ့....
ငါ့ကို ပမာမခန့် ပြုံးပြနေသေးတယ်.....၊
တနေပဲ ကုန်လို့မှ တယောက်လာ နှုတ်မဆက်....
ငါ့အသဲ ဟက်တက် ရက်စက်လိုက်ကြပုံ....၊
ခြေဖျားတွေ အေးခဲ ဘယ်မှလည်း မရွေ့ချင်....
Update: ကျမရေးခဲ့တဲ့ လူ-အမဲလိုက်ခြင်း ပိုစ့်ထဲက အမျိုးသမီးက Corrective Training ၆နှစ် ကျခံသွားရပါတယ်။
Corrective Training က Jail Terms ထက် ပိုပြင်းထန်ပြီး လျှော့ရက် မရှိ နှစ်အပြည့်ကျခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလီ ခရီးစဉ်လေး ဆက်လိုက်ကြရအောင်....
ဒါက ပြန်မဲ့နေ့ မနက် လေဆိပ်အသွား လမ်းဆုံမှာတွေ့ရတဲ့ နတ်မြင်း ၆ ကောင်ကတဲ့ စစ်ချီရထားပါ။ ရထားပေါ်က စစ်သည်တော်ရဲ့ လေးတော်ချိန်ရွယ် ဟန် နဲ့ နတ်မြင်းတွေရဲ့ ကဆုန်ပေါက်နေဟန်တွေဟာ လက်ရာမြောက်လွန်းတာ မို့ ဟိုးမိုးယံအမြင့် ပျံတက်တော့ မလားတောင် ထင်မှတ်စရာပါ။ သဘောကျလွန်းလို့ ကားပေါ်ကနေ မိအောင်လှမ်းရိုက်ခဲ့တယ်...
ဒုတိယပုံက အချစ် ရိုက်ပေးတဲ့ပုံပါ၊ ကားပေါ်ကနေ ရိုက်ရတာမို့ ပထမပုံ ရိုက်ပြီးပြီးချင်း သေချာချင်တာကြောင့် သူ့လက်ထဲ ကင်မရာ ထည့်ပြီး နောက်တပုံ နောက်တပုံ လို့ ပြောရင်း ရိုက်ခိုင်းခဲ့တာပါ ဓါတ်ပုံမှာ ရိုက်ချိန် တူနေတာကို တွေ့ကြပါလိမ့်မယ် သူ့မလည်း ကျမ ဘေးကနေ အမြဲ အဆင်သင့် ရှိနေရရှာပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါ့ ယောင်္ကျားဆိုတော့လည်း ဒီလောက်တော့ လက်သွက်ရမယ်ပေါ့လေ...
လမ်းဘေးတလျှောက် တွေ့ရတဲ့ အုတ်ကြွပ်မိုး နီနီ အိမ်ပြားပြားလေးတွေ....ကျမရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးတမြို့နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ရယ်....
ဒါကတော့ ဘာလီရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အနုအလှ လက်ရာတွေနဲ့ ခင်းကျင်းပြသ ထားတဲ့ အူဘွတ် ခရိုင် Ubud District ရဲ့ လမ်းသွယ်ထဲက လမ်းဘေး ဆိုင်လေးတွေ သူ့ကို Island's Cultural Centre လို့တောင် အမြတ်တနိူးထားလို့ တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြလေရဲ့၊ လမ်းတလျှောက် ပန်းချီ ကားဆိုင်တွေ၊ သစ်သား ပုံထွင်း (Woods Carving) ဆိုင်တွေ၊ ကျောက်တုံး ပုံထွင်း (Stone Carving) ဆိုင်တွေ၊ ပရိဘောဂဆိုင် တွေဟာ ဘာလီနီးစ်တွေရဲ့ လက်ရာအဆင့်အတန်း နဲ့ ဖန်တီး နိူင်စွမ်းတွေကို ဖော်ပြနေကြတယ်....
ကလေးတွေအတွက်လည်း ဒီလို လှပတဲ့ စွန်ရောင်စုံ ဆိုင်လေးတွေ ရှိတယ်၊ လေကြောင်းကို လိုက်လို့ ရစ်လုံးကိုင်လက်ရဲ့ အတိုးအလျှော့ ပါးနပ်စွာ ကိုင်တွယ်တတ်မှုနဲ့ဆို သူဟာ ကိုယ်ပိုင် သိန်းစွန်ရဲ တကောင်လို တိမ်ယံထက်မှာ မြူးမြူးကြွားကြွား ပျံသန်းနိူင်လိမ့်ဦးမှာ....
ဘာလီနီးစ်အိမ်တွေရဲ့ တံခါးဘောင်ခွေပုံဟာ ပန်းနွယ်ကနုတ်တွေနဲ့ ခမ်းနားလွန်း နေသလို တကယ့် သစ်မာသားတွေနဲ့ ပြုလုပ်လေ့ ရှိတာမို့ လေးလည်း အတော်ကို လေးမှာပါ။ ဒါက ခုခေတ် အိမ်တွေမှာသာ တပ်လေ့ရှိပါ တယ်။ ဘာလီလူမျိုးရင်းတွေရဲ့ အိမ်ကတော့ဖြင့် တံခါးတပ်လေ့ မရှိကြပါဘူး၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာထဲက လူကုန်ဟာ ကိုယ့်ဆွေမျိုး ရပ်ဆွေရပ်မျိုး အစုတွေပါ ပဲ၊ ပစ္စည်းလည်း ပျောက်လေ့ မရှိ၊ လူစိမ်းလည်း မရှိ၊ ရှိခဲ့ရင်တောင် ယုံကြည် စိတ်ချလေ့ ရှိကြပါသတဲ့။ ခုထက်ထိ တချို့အိမ်တွေမှာ တံခါးတပ်ထား တာ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး...
ဘာလီလူမျိုးရင်း (Typical Balinese)တွေရဲ့ ရွာကို အချိန်မရလို့ မသွားခဲ့ရတာ ကြောင့် ဒီပုံကို အင်တာနက်ကနေပဲ ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
တံခါးတွေ အထပ်ထပ် သော့ခတ်ပိတ်နှောင်ထားရင်းနဲ့ပဲ အရာရာကို စိတ်မချ လက်မချ မယုံမရဲ ရှိနေကြရတဲ့ မြို့နေလူတန်းစားတွေရဲ့ ရင်အပူနဲ့တော့ ကွာခြားလွန်းလှပါရဲ့....။ နည်းပညာတွေတိုးတက်၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတွေ မြင့်မားလို့ လိုချင် မက်မောစရာတွေ၊ ရုပ် ဝတ္ထု အသစ်အဆန်းတွေ များပြား လာမှုဟာ လူတွေရဲ့ စာရိတ္တကို ချစားပါးလျ စေခဲ့တာလား...ဒါမှမဟုတ် လူတွေ ကပဲ ရောင့်ရဲတင်းတိမ် မှုတွေ ဆင်းရဲလာတာလား....ကျမ စဉ်းစားမိခဲ့ ပါရဲ့....
လမ်းဘေးက တံခါးဘောင် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေး တဆိုင်...
ဟိန္ဒူ နတ်ဘုရား ကျောက်ရုပ်တုတွေကို ကွဲပြားတဲ့ ထုလုပ်ပုံ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လမ်းလေးခွဆုံ တွေမှာ တွေ့ရတတ်တယ်...မကောင်းဆိုးဝါး တွေကို အဝေးဆီ မောင်းနှင်ပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်...တကယ်လို့များ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ လမ်းလေးခွဆုံက မလာပဲ လမ်းကြို လမ်းကြားကလာခဲ့ရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်ပါ့...
ဘာလီမှာ မိသားစု ဘုရားကျောင်းငယ်တွေ အပါအဝင် ဘုရားကျောင်း စုစုပေါင်း ၂၀,၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်...မိသားစုဘုရား ကျောင်းဆိုတာက မိသားစုပိုင် ခြံဝိုင်းထဲမှာ နေ့စဉ်ပူဇော်ပသမှု လုပ်နိူင်ဖို့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ဘုရားကျောင်း အသေးစားလေးတွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ တနှစ်မှာ ၂ကြိမ် ဘုရားကျောင်းကြီးတွေ ပွဲလုပ်တဲ့အခါ ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ ကျောင်းကြီးတွေ ဆီ မိသားစုလိုက် သွား ရောက် ပူဇော်လေ့ရှိကြပါသတဲ့၊
မိသားစု ဘုရားကျောင်းကိုတော့ ခြံဝိုင်းရဲ့ အရှေ့မြောက်ဖက်မှာ ဆောက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ အရှေ့အရပ်က နေထွက်တဲ့ဘက်ကို ကိုယ်စားပြု ပြီး မြောက်အ ရပ်ကတော့ သားကြီး ဩရသတွေရဲ့ နေအိမ် ရှိရာဘက်ကို ကိုယ်စားပြု တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဘာလီနီးစ်တွေဟာ မိသားစုတွေအကုန် ခြံဝိုင်းကျယ်ကြီးထဲ နေလေ့ရှိကြ ပါတယ်။ သားသမီး တွေ အိမ်ထောင်ကျသွားပြီဆိုရင် သူတို့ရဲ့ အိမ်နေရာ ချထားပေးမှုက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ မိဘတွေအိမ်က ခြံဝိုင်းအလယ်မှာ၊ သားအကြီးဆုံးအိမ်က မြောက်ဘက်မှာ၊ သားအလတ် က အနောက်ဖက်မှာ ဖြစ်ပြီး အငယ်ဆုံးသားက တောင်ဘက်...မီးဖိုဆောင်နဲ့ အနီးမှာ နေရာချ ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ သမီးတွေကတော့ မိဘနဲ့ အတူနေပြီး အိမ်ထောင်ကျတော့မှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အိမ်လိုက်လို့ ရှေ့မှာ ပြောခဲ့သလို ခင်ပွန်းရဲ့မွေးချင်းနံပါတ်စဉ် အတိုင်း နေရာချ ပေးတဲ့ နေရာမှာ လိုက်နေကြရပါတယ်။ သားသမီးတွေရဲ့ အိမ်တွေကို မိဘအိမ်ဘက် မျက်နှာပြုလို့ ဝန်းရံပြီးဆောက်လေ့ ရှိပါတယ်။
အဲဒီမှာ ကျမ တွေးမိတာက သားတွေ အများကြီး မွေးထားရင် ဘယ်လိုများ နေရာချမှာပါလိမ့် ဆိုတာပါ...၊ နောက်တခါ သွားဖြစ်ရင် ကျမ မေးခဲ့ပါ့မယ်....:)
ဘာလီမှာလည်း Silent Day (Nyepi) ဆိုတာရှိပါတယ်။ နှစ်စဉ် မတ်လထဲမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး အဲဒီနေ့ကျရင် လေဆိပ်ကအစ ပိတ်ပါ တယ်။ ဒီနှစ်တော့ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ကို Silent Day အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး Travel Agent တွေကတဆင့် တလ ကြိုတင်ကြေငြာတာမို့ အဲဒီနေ့မှာ ဘာလီ ရောက်နေတဲ့ နိူင်ငံခြားသားတွေလည်း ဟိုတယ်မှာပဲ နေကြရတဲ့နေ့တနေ့ပါ။ Silent Day မတိုင်ခင်ညဟာ နှစ်သစ်ကူး အကြိုည ဖြစ်ပြီး Silent Day မှာတော့ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ Holy day အဖြစ် ဥပုသ် ဆောက်တည်ကြတဲ့နေ့ ၊ အင်မတန် တိတ်ဆိတ် မှောင်မိုက်တဲ့နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနေ့ မရောက်ခင် ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်လောက်ကတည်းက ရပ်ကွက် တခုနဲ့ တခု အရုပ်ကြီးတွေ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကြပြီး ရပ်ကွက်ထိပ် မှာ ခုလို ထားတတ် ကြပါတယ်။ ရပ်ကွက်ပေါင်းစုံက အရုပ်မျိုးစုံတွေကို နှစ်သစ်ကူး အကြိုည မှာ Parade လုပ်ပြီးလမ်းတလျှောက် သယ်ပိုး လှည့်လည် ပြသလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်အဖြစ် မီးရှို့ ဖျက်စီး ပစ်တတ်ကြပေမဲ့ တချို့ရပ်ကွက်တွေကတော့ တပင်တပန်းလုပ်ထား ရတဲ့ အရုပ်မို့ မဖျက်စီးသေး ပဲ အတန်ကြာအောင် ခုလို ထားတတ်ကြပါတယ်။ တွေ့တဲ့အရုပ် ကို မိအောင် ကားပေါ်ကပဲ အမြန် ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
အောက်ကပုံတွေကတော့ ထိုင်ခုံတွေ၊ မျက်နှာကျက်တွေမှာ သဘာဝ ထွက်ကုန်ဖြစ်တဲ့ ဝါး၊ သစ်သား၊ နှီးတွေနဲ့ လုပ်ထားတာလေးတွေကို ရိုက်ခဲ့တာပါ။
လူကို သဘာဝအတိုင်း အေးစေတဲ့ မျက်နှာကျက် လေးတွေမို့ သဘောကျမိပါတယ်...။
ဘာလီ ခရီးစဉ်ကို အပိုင်း ၁၀ မှာ အဆုံးသတ်ပါမယ်...:)
ဒါလည်းပဲ ဟိန္ဒူနတ်ဘုရားကို ပသပူဇော်ပုံ နောက်တမျိုးပါ။ သူ့ကိုတော့ ဘုရားပွဲကြီးတွေ ရှိမှ ပွဲမတိုင် ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြပါတယ်...
ဝါးလုံးရင့်ရင့် နဲ့ အုန်းလက်၊ နှီး စတာတွေ တွဲဖက် ယက်ဖောက်လို့ တံခွန်တိုင် ပုံစံ ပြုလုပ်ထား တာ တွေ့နိူင်ပါတယ်။ ပြုလုပ်သူရဲ့ စိတ်ရှည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု နဲ့ အဆန်းထွင်နိူင်မှုပေါ် မူတည်လို့ ပုံစံ အမျိုးမျိုး တွေ့ခဲ့ရတယ်...
အသေးစိတ် ကြည့်ရင် ဆင်တူမယောင်နဲ့ ထိုးယက်ထားတဲ့ ပုံစံ ကွဲပြားတာ တွေ့ရမှာပါ။ အောက်ခြေကနေ ပခုံးစွန်း အမြင့်လောက်မှာ တော့ အမိုးခုံး၊ အမိုးချွန် ပုံစံအစုံနဲ့ ခိုအိမ်လေး တွေလို တွေ့ရမယ်...အိမ်ကလေး အောက်ခြေမှာ ပန်းပွားလိုလို ဘာလိုလို တွဲရရွဲ ချထား တတ် သေးတယ်....
အနီးကပ်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ အထဲမှာ သစ်သီးအစုံ နဲ့ ရိုးရာမုန့်တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်...
အဲဒီကနေ ကိုရွှေကားသမား ပို့ပေးတဲ့နေရာကတော့ လှေကားထစ် စိုက်ခင်းတွေဆီကိုပါ....
ဘာလီ မြောက်ပိုင်းရဲ့ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းက စိုက်ပျိုးရေးလို့ ဆိုပါတယ်...စပါးနဲ့ ကော်ဖီ အစိုက်များကြပါသတဲ့...
ကျမတို့လို လူတွေအဖို့တော့ ဒီစိုက်ခင်းတွေက ဘာဟုတ်ပါ့မတုန်း...၊ ရီတာပေါ့...ရီတာပေါ့...ဒါပေမဲ့ တခုတ်တရ လိုက်ပို့ရှာတဲ့ ကားသမား စိတ်ချမ်းသာအောင် စိုက်ခင်းချည်းပဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်၊ ပြီးတော့ လူနဲ့လည်း ၂ပုံ ၃ပုံ တွဲရိုက်ပြလိုက် ခဲ့ပါတယ်...(လူပုံနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတွေတော့ ဘလော့ဂ်ပေါ် တင်တော့ပါဘူးလေ...စိတ်ဝင်တစား ကြည့်ချင်သူများ ကျမ e-mail လေးသာ တိတ်တိတ် တို့လိုက် ကြပါတော့...:))
မနက်ပိုင်းက လိုက်ပို့တဲ့ထဲမှာ ငွေထည်လုပ်ငန်း ဆီကိုလည်း ပါ ပါတယ်...ဒါက အဝင်ဝပါ၊ အကြမ်းထည် လုပ်တဲ့နေရာ နဲ့ ထွက်ကုန်အချော ပြသရောင်းချတဲ့ နေရာရယ်လို့ ၂ နေရာ ဘေးချင်းကပ် ခွဲထားပါတယ်....
အဝမှာ တွေ့တဲ့ အရုပ်တွေက ဘုရင်ရဲ့ ရွိုင်ရယ် မိသားစုလို့ ဆိုပါတယ်...
အဲဒီငွေထည်တွေက ပြည်ပပို့ကုန်တွေသာ ဖြစ်တာမို့ အရည်အသွေး လက်ရာလည်း ကောင်း၊ ဈေးလည်းကြီးပါတယ်။ အပြီးသတ် အချောထည်ကို ဓါတ်ပုံရိုက် ခွင့် မပြုတာမို့ ပြုလုပ်နေဆဲ တွေကိုပဲ ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်...
များသောအားဖြင့် နားကပ်၊ ဆွဲကြိုး၊ ရင်ထိုး၊ လက်ကောက် နဲ့ လက်စွပ်တွေ ၊ ဆွဲသီးလေး တွေပါ...ဝရိန်ဆော်သူ၊ လွသွားလေးနဲ့ ဖြတ်သူ၊ အရောင်တင်သူ၊ လိုင်းဖော်သူ အစုံပါပဲ...
အလုပ်သမားပေါင်း ၁၅၀ ကျော်ရှိပြီး အလုပ်ချိန်က မနက် ၉နာရီကနေ ည ၁၀နာရီ၊ တပတ်မှာ ၆ရက် အလုပ်ဆင်းကြရတယ် ဆိုပါတယ်...
ကျမက စပ်စုလွန်းစွာနဲ့ လိုက်ပြတဲ့သူ (စူပါဗိုက်ဇာထင်ပါရဲ့) ကို သူတို့ တလကို လစာ အနဲဆုံး ဘယ်လောက်ရကြသလဲ မေးကြည့်တော့ သူက ပြုံးပါတယ်...ပြီးမှ သတ်မှတ်ချက်အရ တလကို အနိမ့်ဆုံးလစာ ရူးပြား ၈၀၀,၀၀၀ ရှိရမယ်လို့ ဖြေရှာပါတယ်။
အဲဒါတွေ ပြပြီးတဲ့အခါ အချောထည်တွေဘက် ခေါ်သွားပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဈေးရောင်းပါတယ်...လက်ထဲကို စကောဝိုင်း သေးသေးတချပ် ထည့်ပေးပြီး ကြိုက်ရာ ကောက်ထည့်သွား ပြီးမှ အထွက်မှာ ပေးရပါတယ်...တပတ်သာ ပတ်မိတယ် ကျမဖြင့် တခုမှ ဝယ်ချင်စိတ်၊ မဝယ်ရ မနေနိူင်ပေါင် ဆိုတာမျိုး မခံစားရတာမို့ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ပစ္စည်းတွေက လှပါတယ် ကျမနဲ့ မလိုက်ဖက်တာ ပြီးတော့ ဈေးလည်း များနေတာမို့ပါ...
ဒါကိုပဲ ကျမရဲ့ Mr.Nice Guy ကြီးက မျက်နှာပူလှပြီ။ ကျမ အာစေးပေါက်မတတ် လျှောက်မေး ကတည်းက သူက အားနာနေတာလေ။ ဟိုပစ္စည်းလေး တခုယူလာ လိုက်၊ ဒါလေး ဝယ်ပါလား လုပ်လိုက်၊ နောက်တမျိုး ယူလာလိုက်၊ ကျမကိုယ်ပေါ် ကပ်ပြပြီး လိုက်တယ် လှတယ် ပြော လိုက်နဲ့ သူ့မှာ ပျာယာထ နေရောပဲ။ ကျမကလည်း မယူဘူး ဆို မယူဘူးပဲ။ အထွက်မှာ အစောင့် လက်ထဲ ဘာမှ မပါတဲ့ စကောလေး ပြန်အပ်လို့ အားနာပါးနာ တခွန်းတော့ ဆိုခဲ့ပါ တယ်...ဆောဒီး လို့...
အမျိုးသားက အဲလိုပါပဲ သူများဖက်က တွေးပေးပြီး အားနာတတ်တာ အလွန်ပါပဲ။ သူက အဲသလို အရမ်းကောင်းနေတော့ သူနဲ့ ယှဉ်လိုက် တိုင်း ကျမမှာ နေရင်းထိုင်ရင်း လူဆိုးမကြီး လုံးလုံး ဖြစ်နေရတော့တာပါ...
ဘာလီပိုစ့် မပြီးသေးပါဘူး ဆက်ပါအုံးမယ်...
at April 20, 2010 21 comments:
at April 18, 2010 18 comments: